Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment एस्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप लगाउँदा रगत जमाउँछ ? - Pnpkhabar.com
एस्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप लगाउँदा रगत जमाउँछ ?
एजेन्सी, ४ चैत्र : युरोपियन युनियनले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप लगाउँदा रगत जम्ने समस्या कुनै पनि हालतमा नरहेको र यो सुरक्षित रहेको दोहोर्‍याएको छ । खोपका कारण रगत जम्ने समस्या हुने कुनै संकेत नरहेको भन्दै युरोपियन मेडिकल एजेन्सी (यूएमए)ले यो खोप लगाएकै कारण रगतमा खराबी आउने कुरा गलत भएको दाबी गरेको हो ।
युरोपमा ७० लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउँदा ३७ जनामा रगत जम्ने समस्या देखा परेपछि केही देशहरुले यो खोप लगाउन छाडेका छन् । खोपबारे प्रश्न उठेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनका खोप सुरक्षा विशेषज्ञहरुले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपबारे छलफलसमेत गरेको छ । विशेषज्ञ टोलीले खोपका कारण अथवा अरु कुनै कारण रगतमा समस्या हो भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
खोपबारे अध्ययनको नतिजा केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने विशेषज्ञ टोलीको तयारी रहेको छ । यो खोपले मानिसको शरीरमा फाइदा गर्ने र कोरोना भाइरससँग लड्न सहयोग गर्ने विशेषज्ञ टोलीले विश्वास लिएको छ । युरोपियन युनियनले भने रगतमै पहिलेदेखिकै खराबीका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यो खोप नरोक्न निर्देशन दिएको छ ।